मानिसलाई बिरामी बनाउने भाइरस कुन समयमा बढी सक्रिय हुन्छ ? जानीराखाै - ज्ञानविज्ञान
भाइरस अन्य समयको तुलनामा बिहान १० गुणा सक्रिय हुने एउटा पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । भाइरसले विहान संक्रमण गरेमा अन्य समय भन्दा १० गुणा बढी सफल हुने युनिर्भसिटी अफ क्याम्ब्रिजको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
शरिरको जैबिक घडीमा हुने असरले संक्रमणको जोखिम बढ्ने मुसामा गरिएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनले भाइरसको महामारी रोक्न एउटा नयाँ उपाय प्रदान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले विश्वास गरेका छन् ।
अध्ययन अनुसार विहान इन्फ्लुयन्जा संक्रमित मुसामा साँझ संक्रमित भएको भन्दा १० गुणा बढी भाइरसको मात्रा देखिएको थियो ।
‘भाइरसलाई पनि संक्रमण गर्न उचित समय चाहिँदो रहेछ । नत्र भने ऊ गतिशिल हुन सक्दो रहेनछ। तर सानो भन्दा सानो संक्रमण बिहान सक्रीय हुन्छ र बिहान भाइरसले शरिरलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन्छ,’उनले भने । अध्ययनले रोगका महामारी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने उनले विश्वास गरे ।
जनावरहरुको जैबिक घडी परिवर्तनको अर्थ शरिरले भाइरस संक्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्नु वा निम्तो दिनु भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन समूहका अर्का वैज्ञानिक र्याचल इडगार भन्छन्, ‘सिफ्टमा राती काम गर्नेको शरिरको जैविक घडी बिथोलिएको हुन्छ । उनीहरुलाई भाइरल रोगको जोखिम बढ्छ।’
अनुसन्धानकर्ताले अध्ययनमा केबल दुई ओटा भाइरसको प्रयोग गरेका थिए ।
Don't Miss it के गर्ने बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउन ? जानिराखाैँ
Up Next हिङ के हो र यो स्वास्थ्यको लागि कति फाइदाजनक ?